ROSE "GRAHAM THOMAS": SHARAXAAD, SAWIR, DEGEL, DARYEEL - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada hoogaaga koraya "Sins Thomas"
Roses - qurxinta runta ah ee beerta kasta. Dhirta quruxda badani waxay caan ku ahaayeen ubax growers oo dhan adduunka oo dhan qarniyo badan. In ka badan 3000 oo noocyo ah ubaxyadaas waxaa lagu koray dhaqanka. Waxaan ku sii noolaan doonnaa Ingiriis si aan si faahfaahsan uga dhigno, taas oo ah, waxaan la socon doonnaa noocyo kala duwan oo ah "Graham Thomas".
Ingiriis Giriig ah - ubaxyo aan caadi aheyn oo ubaxyo leh, oo leh caan masiixi qarnigii 21aad oo ku soo laabtay qaabka 80aad. Sanadkii 1983, David Austin waxaa la siiyay noocyo kala duwan, kaas oo uu magacaabay saaxibkiisa, sidoo kale khabiir ku takhasusay berrinka, Graham Thomas. At bandhigga ee Chelsea, ubaxa soo jiidatay oo wuxuu ku dhacay jacayl naftiisa isla markiiba thanks to a buro jaalaha ah aan caadi ahayn iyo caraf udgoon. Kala duwanaanshahaan waxaa sameeyay aasaaskii "Charles Austin" iyo "Iceberg".
Ma taqaanaa? Marka laga eego kala duwanaanshaha guriga, gudaha England, si loo qirto dareenkooda, gacaliyuhu wuxuu bixiyaa laba jibaar midab leh.
Waa suurtagal in la qeexo ereyada "Graham Thomas" ereyada iyada oo aan eegin sawirkeeda, oo kaliya markaad eegto oo aad fahamto dhammaan waxa soo jiidashada ay ka kooban tahay, mid mid ayaa sii wadi kara sharaxaadda afka ah.
Waxa ay u muuqataa in ubaxkan uu leeyahay haddii uusan dhammaan, ka dibna inta badan ee midabada huruud ah, taas oo sidoo kale ay ku xiran tahay xaaladaha cimilada. Dhabarka labajibbaaran ee la isku qurxiyo wuxuu gaari karaa dhexroor 8-10 cm, oo ku yaala barafka waxaa ku jira qiyaastii 75 qoryaha ah oo ilaaliya xarunta dhexe ee buraashka, oo kaliya furan iyada oo qaabkeeda ay u eg tahay. Inflorescences waxaa badanaa la ururiyaa laga bilaabo 6-8 ubax waxayna bixiyaan caraf udgoon iyo caraf udgoon. Xoortayada jilicsan ayaa lagu gartaa caleemaha cirridka leh caleemo cagaaran oo cagaaran. Heerka iyo ballaaran ee baadiyaha way kala duwan yihiin xaaladaha cimilada laga bilaabo 1.2 ilaa 3.5 m ee dhererka iyo 100-120 cm mugga. Rose Blooms 'Graham Thomas' si joogto ahxagaaga oo dhan.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan noocyada soo jiidashada ee qaboobaha: "Double Delight", "Sophia Loren", "Pierre de Ronsard", "Parfis Blue", "Falstaff".
Ku fiican in la beero meelaha qorraxdu ka baxdo iyo hooska qayb ahaan. Waxa ugu muhiimsan - Saar geedka 6-7 saacadood qorraxda furan. Goobtu waa inay ahaato mid hawo fiican leh.
Laga soo bilaabo xulashada goobta waxay ku xiran tahay natiijada beerashada: tusaale ahaan, meel qorrax leh oo qorrax leh, waxaad ku heli kartaa baadiyaha isku dhafan oo leh ubax badan, iyo meel haadi ah - geed dheer oo leh burooyin yar yar.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo fogaanta marka la beerto: duurka iyo dhirta waa in ay ahaadaan ugu yaraan hal mitir oo ka fog geedka. Haddii kale, waxaa jiri doona halgan nafaqo.
Diyaarinta iyo geedo beerto
Waxaad dhali kartaa gogol guga guga ama dayrta.
Geedo waxay u baahan yihiin in la diyaariyo horey loogu beeray, iyagoo horay u ilaalinayey xalka roota-sameynta 24 saacadood, ka dibna ka dibna sii wadaa in la beero ciidda heerkeedu yahay 50x50x50 cm, taas oo ah, qoto dheer, ballaca iyo masaafada u dhexaysa dhirta waa inay ahaadaan kuwo siman.
Iyadoo diyaarisay godadka dhulka, waa lagama maarmaan wanaagsan si aad u qoyso - Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo 1 baaldi biyo ah ceel kasta. Taas ka dib, waxaad si toos ah ugu socon kartaa geedo beerto. Si taxadar leh u toosi xididada oo ku rid godka, ka dibna daboolo substrate si markaasi geedka buraashu uu aad u qoto dheer u galo ciidda ugu yaraan 7cm. Dhul dhulka, iyo maalinta ku xigta waxaad u baahan tahay inaad duurjiso oo aad u biyo badan.
Macalinka Ingiriisiga ah wuxuu u dhexeeyaa kala duwanaansho-galinta, sidaas darteed dhammaan hababka daryeelka waa in loo sameeyaa si habboon oo haboon. Haddii aad raacdo xeerarka fudud, waxaa laguu balan qaadayaa in aad hesho geedo qurux badan oo qurux badan leh ubax badan.
Ma taqaanaa? Fasalka "Graham Thomas" wuxuu leeyahay in ka badan 50 abaalmarin, iyo abaalmarinta ugu sareysa iyaga. James Mason oo ka tirsan Jaamacadda Boqortooyada ee Bahqaanka, waxa la siiyay 2000.
Qoyaan - Mid ka mid ah qaybaha guusha ee beerista fasalada "Graham Thomas." Waraabinta waa in ay ahaataa mid dhexdhexaad ah, laakiin waqtigeeda. Sida ugu dhakhsaha badan lakabka ugu sareeya ee ciidda agagaarka geed ayaa la qalajiyey, waa inaad bilowdaa nidaamyada biyaha. Qiyaasta biyaha waxay ku xiran tahay xaaladaha cimilada, sidaas darteed hubaal maahan inay suurtagal tahay in la go'aamiyo: waa inaad ku tiirsataa khibradaada iyo dareenkaaga.
Isla markiiba ka dib markii la beero, bilowga xilli sii kordhaya, Bacriminta nitrogen waa in la isticmaalo. Fosfooraska iyo kaalshiyamku waxay damaanad qaadayaan in ay ku guulaystaan ​​dhogor fiican ee burooyinkooda - waxay u fiicantahay in dharka la dhigo bisha May-Juun. Bishii Agoosto iyo Sebtembar, waxaad ku dari kartaa adoo ku dhajinaya potassium. Waxaa fiican in la dhowro bacriminta ee hindiskan kor u qaaday, iyo sidoo kale in ay u hoggaansamaan mabda'a ah in ay ka wanaagsan tahay in ka yar inta ka badantahay.
Sidoo kale akhri waxyaabaha ku saabsan dareenka daryeelka iyo noocyo of daboolka daboolka ah ee dhulka, waxyaabaha gaarka ah ee koritaanka sii kordhaya iyo hambalyada caadiga ah.
Waxay dhamaan ku xiran tahay fikraddaada iyo sida aad u aragto warshadda naqshadeynta muuqaalkaaga. U hubso inaad gooyso geeddi-socodka wax-u-qabashada iyo is-beddelka, iyo sidoo kale caws ubax ah oo gaabiyay. Dhammaan inta kale ee la marsiiyo manjooyin iyo samaynta geedaha, waxaad ku qaban kartaa dhadhankaaga.
Dhamaan ingiriisyada Ingiriisku uma dulqaadanayaan qoyaan xad dhaaf ah: sababtoo ah dhirta iyo xanuunka jiran. Sida qiyaasta ka hortagga, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo daadiyo ciidda iyo in aanay daadin geedka. Xilliga roobka waa in la ruxraa duurka iyo burooyinkeeda ka yimaada dhibcaha.
Cudurada ugu caansan ee hoogaaminta Ingiriisiga, oo kobciya sababtoo ah qoyaan iyo roobab badan - kallana midab-ciriiri ah. Fangaskani wuxuu ku fidiyaa xididdada geedka, iyaga oo ku dhalaya iyaga. Calaamadaha ugu horreeya ee muuqaalka cudurka, iyo waxa lagu go'aamin karaa xaqiiqda ah in ubaxyada iyo caleemaha ay bilaabaan kallana, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro meelaha ay saameeyeen iyo jeermiska ciidda, tusaale ahaan, iyadoo la isticmaalayo Fitosporina-M, Alirin-B ama Gamair.
Waxaan rabaa inaan xooga saaro in xayawaanka "Graham Thomas" ay ku habboon yihiin daryeel caafimaad, oo xanuunsan, oo ay saameeyaan cayayaanka aan dhif ahayn, maadaama ay yihiin kuwo aad u adag oo joogto ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sifooyinka wax soo saarka shaaha, Dutch, Canadian-ka.
Faafin-aadanku gooynta iyo dhejinta. Midda ugu fudud iyo kan ugu saameynta xitaa xataa beeralayda hiwaayadda waa dhalmo by layaab. Taas waxaad u baahan tahay inaad doorato dhalinyaro aad u xoog badan, gooyo caarada, geli ciyaarta. Markaas waxaad u baahan tahay inaad ku lifaaqaan asliga ah dhulka, yar yar prikopat iyo ku shub.
Waa muhiim! Ciidda loo jarayo waa in la diyaariyaa: marka hore ka saar haramaha, bacriminta iyo dabacsan.
Samee nidaamka Luuliyo ilaa Agoosto, iyo guga waxaad kala saari kartaa abuurka diyaarinta ee warshadda hooyada.
Jarjinta waxaa loo tixgeliyaa in ka yar guul, laakiin sidoo kale waa mid aad loo isticmaalo. Wixii guntooda dooran laamaha xoog leh. Geedka derbiga ah waxaa loo tixgeliyaa inuu jirkiisu yahay 2-3 caleemo, halka 1 ama 2 ka mid ah caleemaha hoose laga saaro, oo keliya hal caleen. Ka dibna wax lagu beerto waxaa lagu beeray diyaarinta bacriminta, dabacsan iyo ciidda qoyan fogaan ah 20 cm midba midka kale.
Baro sida loo hayo-aadanku jarjarey wax yar oo dheeri ah, iyo sida loo koro dhalashada dheri.
Roses "Graham Thomas" ayaa loo tixgeliyaa Jiilaal aad u adag. Xilliga jiilaalka waa gaaban gaaban. Buunshaha waa la jari doonaa habkaas oo kaliya saldhigeedu wuxuu ku yaalaa dhowr burooyinkood. Jarjumeynta waa in lagu sameeyaa saldhig fiiqan oo kele. Qalliinka ka dib, waxaad u baahan tahay dhulka baadiyaha prikopat. Waxaa fiican inaad ciidda u qaadato hills oo geeska kale ee beerta, oo aan si toos ah ku xigta Rose, sida marka qodaya ilaa aad dhaawici kartaa xididdada geedka. Laga soo bilaabo korka, baadiyaha duuban waxaa lagu daboolay lakabka ah caleenta, dhadday ama laamood Haddii gobolkaagu leeyahay kuleyliyo aad u daran oo heerkulku hoos udhaca -30 ° C, daboolaa baadiyaha leh filim badbaado ugu badnaan. Masaafada u dhexeysa filimka iyo warshadu waa inay ahaataa ugu yaraan 15 cm.
At hoyga ku shubtay lakabka ah ee caleenta iyo daboolay laamo. Gurigaan, Ingiriisku wuu kacsan yahay. Guga, hoyga waxaa laga saaraa marxaladaha: marka hore, laamaha iyo caleemaha ayaa la saaraa, iyo geedku wuxuu ka baxayaa filimka dhowr toddobaad. Maaddada ayaa qulqulaya qorraxda qorraxda waxayna ka ilaalineysaa gogolka xilliga gu'ga - xaaladaha aqalka dhirta sida, geedku wuxuu toosaa oo kobciyaa dhaqso.
Rose ee Ingiriisku waa mid cajiib leh oo qurux badan oo qurux badan oo soo jiidan doona dareenka iyo qurxinta beerto kasta oo beerta. Aristocratic karishiinka iyo udgoonku wuxuu ku guulaysan karaa wadnaha iyo malaynti labadaba lakab iyo gabbalis cusub.
Midabada madow: noocyada ugu fiican ee currant madow
Rose Jam: Saddexda Roodhiga ugu Fiican
Ukraine waxaa ku yar sonkorta gudaha
Waxaa soo sheega koox ka mid ah shirkadaha "Renome", oo ku hawlan ganacsi gaar ah. Shirkadahaas, marka lagu daro kalluunka sii kordhaya, waxay ku hawlan yihiin horumarinta, iyo sidoo kale horumarinta IT. Ka dib erayada Nadezhda Gladkevich, snails wuxuu ku koraa xayawaanka rybgospa, taas oo hadda taagan waqtiyada adag. Xilligan, sida laga soo xigtay Agaasimaha, Ukraine, baahida loo qabo snails waa yar yar, sababtoo ah ma jiraan dhaqanka ee isticmaalka xayawaankan ee dalka. Read More
Saadaalinta 2 toddobaad - ma runbaa? Cunnooyinka ku salaysan sinjiga, biyaha macdanta, liin iyo waxyaabo kale
Qolka Elwoodi: wuxuu beerto iyo daryeelka guriga